गोकर्ण फरेस्ट लिज विवाद: सर्वोच्चको प्रश्न- म्याद नसकिँदै किन थपियो? - नेपाल घटना
गोकर्ण फरेस्ट लिज विवाद: सर्वोच्चको प्रश्न- म्याद नसकिँदै किन थपियो?
प्रकाशित : २९ पुष २०७६, मंगलवार २०:५७
सर्वोच्च अदातलले यति होल्डिङस प्रालिअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिको भाडा अवधि समाप्त नहुँदै अवधि बढाउने निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
कानून विपरीत सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नै नगरी दिएको गोप्य रुपमा भाडा अवधि समाप्त नहँुदै दिएको उल्लेख छ । सो रिसोर्ट रहेको ठाउँमा जङ्गल रहेको र जङ्गलमा हरिण, मृग, कालीजलगायत जङ्गली जनावरको बस्ने स्थानमा होटल, रिसोर्ट र मानवीय व्यवहार सञ्चालन गर्दा जीवजन्तुलाई असर पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वाेच्चले माग्याे गाेकर्णलाई लिज थप्नुकाे कारण